Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo shaacisay Jadwalkii imtixaamadka Naqliga iyo shaahadiga ahaa – Ministry of Education in Puntland
Ku : dhamaan Gudoomiyeyaasha Waxbarashada Gobolada Puntland.
OG: Gudoomiyeyaasha Degmooyinka Waxbarashada Puntland.
OG: Dhamaan Maamulayaasha Iskuulada Dugsiyada Hoose/dhexe iyo sare.
OG: Agaasime waaxeedadda Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare.
OG: Agaasimaha Guud ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare.
OG: Wasiir Ku xigeenka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare.
OG: Wasiir Dowlaha Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare.
OG: Wasiirka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare.
Gudoomeyeyaasha Waxbarasahada Goboladda, degmooyinka iyo maamulayaasha dugsiyada waxa la faraya inay si buuxda u fuliyaan warqada hoose , iyagoo Tixgalinaya warqaddii ka soo baxaday Xafiiska Waaxda Tayo-dhowrka iyo Kormeerka ee Wasaaradda Waxbarashda iyo Tacliinta Sare ee faraysa, xadidaysana xilliyada imtixaanaadka naqliga iyo shahaadiga.
Agaasimaha Waaxyada Tayo-dhowrka WWTS C/Qaadir yuusuf Nuux ayaa fariin cad u diray gudoomiyeyaasha Waxbarashada Gobolada si looga hortago tafararuqa , midaynta Waqtiga Fasaxna looga faa’iideysto waxii howlo ah ee taagan sida Tabarada, qorshe dajinta dugsiyada, saxidda iyo soo gudbinta imtixaanada iwm, waxuuna musuuliyinta Gobolada Waxbarashada u sheegay inay fuliyaan midaynta Waqtiga imtixaamaka naqliga iyagoo raacaya nidaamka Wasaaradda Waxabarashada iyo Tacliinta sare.
Hoos kala dega Jadwalka Itixaamdka Naqliga ah iyo Shahaadiga.